Mividiana Holder Holder Laptop amin'ny alàlan'ny finday mora entina - fandefasana maimaim-poana ary tsy misy haba | WoopShop®
Portable laptop Side Phone Convenient Holder tafaverina ary halefa raha vantany vao tafaverina ny tahiry.
Karazana: Fitaovana fitaovan'ny tanana
Fitaovana: Plastika, ABS
Lanja Net: 90G
Vola entina: 109G
Fampiasana: DIY Home
Manaova efijery roa indray mandeha: apetaho amin'ny sisin'ny solosainao findainy ity mba hitazonana ny finday avo lenta azo antoka sy mora idirana. Mora amin'ny resaka video miaraka amina olona iray raha ny laptop-nao kosa dia feno asa hafa.
Tendrombohitra azo ovaina: Satria ny endriny mihodina afaka mifanaraka amin'ny toerana maro, dia afaka manome zoro fijery mety amin'ny efijery fitaovana izy io. Azonao atao ny manova ny toerana fametrahana arakaraka ny safidinao ary apetrakao amin'ny ilany havia na havanana amin'ny efijery.
Ampifanaraho amin'ny telefaona sy telefaona be indrindra: Ireo mpitazona telefaona sy takelaka vaovao, miaraka amina clip sy kojakoja fanampiny simoôna, dia azo ovaina mora foana amin'ny sehatra sy lamosina maro karazana. Ny takelaka silika azo esorina ao anatiny dia mahatonga azy io hifanaraka tsara kokoa amin'ny haben'ny hateviny samihafa, ary mety tsara amin'ny fametrahana azy amin'ny efijery sy faritra hafa.
Mora: mora apetraka sy ampiasaina, ary mora ny miditra amin'ny findainao; Mora amin'ny fijerena horonan-tsary tutorial, miresaka amin'ny mpiara-miasa aminao, raha afaka mifantoka amin'ny asanao koa. Manamora ny fiasana na fandalinana!
Tompon'ny telefaona an-telefaona laptop × 1/2/4
Miorina amin'ny fanavaozana 10
Amin'ny maha-decribed, fandefasana haingana, tena ilaina, tompona telefaona tsara indrindra hatrizay!
Fandefasana haingana, milamina ary tena ilaina
Tena miorina tsara sy mieritreritra tsara. Fonosina fonosana tsara ary nalefa haingana.